စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အခွအေနမြေား - Outilsdecuisine.com
ou အကောင့်တစ်ခု Create
"အားလုံးသည်ရေ မှစ. "
ဒီ website Outilsdecuisine.com အားဖြင့် operated ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ site တွင်, စည်းကမ်းချက်များ "ကျနော်တို့", "ကျွန်တော်တို့ကို" နှင့် "ကျွန်ုပ်တို့၏" Outilsdecuisine.com ရည်ညွှန်း။ Outilsdecuisine.com အားလုံးအသုံးအနှုန်းများ, အခြေအနေများ, မူဝါဒများနှင့်ထုတ်ပြန်ချက်များအသိပေးစာသင့်ရဲ့လက်ခံမှုအပေါ်အေးစက်, အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုအပါအဝင်အားလုံး tools တွေကိုနှငျ့သငျမှရရှိနိုင်သမျှသောဝန်ဆောင်မှုများ, အသုံးပြုသူသည်ဤ website ကိုကမ်းလှမ်း ဤနေရာတွင်။
နှင့် / သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏တဦးတည်းဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ဤ site ကိုသွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ "ဝန်ဆောင်မှု" တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့် ( "စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ", "အထွေထွေရောင်းရန်၏အခြေအနေများနှင့်အသုံးပြုမှု" ကိုအောက်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခံရဖို့သဘောတူ "စည်းမျဉ်းများ"), သတ်မှတ်ချက်များ, အခြေအနေများနှင့်အရာရည်ညွှန်းဟိုက်ပါလင့်ခ်အားဖြင့်ကဒီမှာလုပ်နှင့် / သို့မဟုတ်မရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်မှနောက်ထပ်မူဝါဒများအပါအဝငျ။ ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အရောင်းစျေး၏အခြေအနေများနှင့်အသုံးပြုမှုရောင်းချသူများမှာသော site ကို browse သူကိုအသုံးပြုသူများသည်, ဖောက်သည်များ, ကုန်သည်များကန့်သတ်ထားအပါအဝင်သော်လည်းမဒီ site ၏အားလုံးသုံးစွဲသူများလျှောက်ထားနှင့် / သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာမျှဝေသူ။
ရောင်းရန်ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုဖတ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုရယူသုံးသို့မဟုတ်အသုံးမပြုခင်သုံးပါပါ။ ဒီ site ၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအားဝင်ရောက်သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်ရောင်းချခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းဤအခြေအနေများအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခံရဖို့သဘောတူသည်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်စည်းကမ်းချက်များနှင့်သဘောတူညီချက်အားလုံးအခြေအနေများကိုလက်မခံကြဘူးလျှင်, သင်က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသို့မဟုတ်အဲဒီမှာကမ်းလှမ်းန်ဆောင်မှုကိုအသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ ဤအရောင်းစျေး၏အခြေအနေများနှင့်အသုံးပြုမှုကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်, လက်ခံမှုဖော်ပြရောင်းချခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကန့်သတ်ထားသည်။
အားလုံးအသစ်က features နဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဆိုင်လည်းထိုအရောင်းစျေး၏အခြေအနေများနှင့်အသုံးပြုမှုမှဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဆက်ပြောသည်ပါလိမ့်မည်သောသူအပေါင်းတို့သည်သစ်ကိုကိရိယာများ။ သငျသညျရောင်းရန်၏စည်းမျဉ်းများ၏နောက်ဆုံး version ကိုစစျဆေးနှင့်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မသုံးပါနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သည်အကို update ကိုပြောင်းလဲရန်သို့မဟုတ်အစားထိုးရန်ရောင်းရန်ဤအခြေအနေများမဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့် / သို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲများကိုပို့စ်တင်နေဖြင့်အသုံးပြုနည်းခွင့်ရှိသည်။ ဒါဟာအပြောင်းအလဲများကိုကြပြီဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးနိုင်ရန်မှန်မှန်ဒီစာမျက်နှာကိုစစ်ဆေးသင့်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်အပြောင်းအလဲများထုတ်ဝေပြီးနောက်အဲဒါကိုဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ် access ကိုသင်၏ဆက်လက်အသုံးပြုမှုထိုကဲ့သို့သောပြောင်းလဲမှုကိုသင်ခြင်းဖြင့်လက်ခံမှုရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုင်သူတို့ဟာငါတို့ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရောင်းဖို့ခွင့်ပြု e-commerce ကိုပလက်ဖောင်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေး Shopify Inc ကိုပေါ်တည်ခင်းဧည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆောငျးပါး 1 - ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းစတိုးသတ်မှတ်ချက်
ရောင်းချခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုလက်ခံခြင်းအားဖြင့်, သင်, သင့်နိုင်ငံအတွင်းရှိနေထိုင်ရာပြည်နယ်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်အများစု၏အရွယ်သို့ရောက်ရှိပါပြီနှင့်သင်ငါတို့အားတစုံတခုသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်အသက်ခွင့်ပြုပါရန်သင်၏ခွင့်ပြုချက်ပေးပြီကြောင်းကိုယ်စားပြု ဒီ website ကိုသုံးစွဲဖို့အသေးစားသင်၏တာဝန်။
အဆိုပါဆိုတရားမဝင်သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲရည်ရွယ်ချက်ဘို့ငါတို့ထုတ်ကုန်များ၏အသုံးပြုမှုအားပိတ်ပင်တားမြစ်သည်, သင်မပေးသင့်ပါတယ်, ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း၏အခြေအနေတွင်, (ဥပဒေများကိုကန့်သတ်ထားအပါအဝင်သော်လည်းမသင့်ရဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏ဥပဒေများချိုးဖောက် မူပိုင်) ။
သငျသညျပိုးကောင်များ, ဗိုင်းရပ်စ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အဖျက်သဘောသဘာမဆို code ကိုထုတ်လွှင့်မပေးရပါမည်။
ဆောငျးပါး2- အထွေထွေအခြေအနေများ
ကျနော်တို့သမျှမည်သည့်အကြောင်းပြချက်များအတွက်မည်သူမဆိုနှင့်မှန်ဆောင်မှုမှမဆိုအချိန် access ကိုမှာငြင်းဆန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
သငျသညျ (သင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်သတင်းအချက်အလက်အပါအဝင်မဟုတ်) သင့်ရဲ့ content တွေကို encrypt မလုပ်ထားသည့်ထုံးစံပြောင်းရွှေ့စေခြင်းငှါနားလည်, ဤအမျိုးမျိုးသောကွန်ရက်များကျော် (က) transmission ကိုဆိုလို; နှင့် (ခ) ညီနှင့်ချိတ်ဆက်ကွန်ရက်များသို့မဟုတ် devices များနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲစေပါသည်။ ခရက်ဒစ်ကဒ်သတင်းအချက်အလက်အမြဲကွန်ရက်များကျော်ထုတ်လွှင့်နေစဉ်အတွင်း encrypted ဖြစ်ပါတယ်။
သင်, မျိုးပွားပွား, မိတ္တူ, ရောင်းချ, ထို Service ကိုမဆိုအဘို့ကိုပြန်လည်ရောင်းချရန်သို့မဟုတ် exploit ဒါမှမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲထောက်ပံ့ထားတဲ့မှတဆင့်ဝန်ဆောင်မှုဒါမှမဟုတ်က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်မဆို access ကိုမသုံးစွဲဖို့သဘောတူ ကြိုတင်ကျွန်တော်တို့ကိုကရေးသား Express ။
ဆောငျးပါး3- သတင်းအချက်အလက်တိကျ, ပြည့်စုံအချိန်မီ
ဒီ site ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်သတင်းအချက်အလက်တိကျမှန်ကန်ပြီးပြည့်စုံသောသို့မဟုတ်လက်ရှိလျှင်ကျနော်တို့တာဝန်မယူဖြစ်ကြသည်။ ဒီ site ၏ content တွေကိုသတင်းအချက်လက်များအတွက်သာရည်ရွယ်ချက်သည်နှင့်ပိုပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့် updated သတင်းအချက်အလက်ပိုမိုတိကျမှန်ကန်အရင်းအမြစ်, တိုင်ပင်ခြင်းမရှိဘဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချဘို့အအချက်အလက်များ၏သင်၏အသာအရင်းအမြစ်ဖြစ်သင့်ပါဘူး။ သင်သည်ဤ website တွင်တင်ပြအကြောင်းအရာယုံကြည်စိတ်ချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာဒါလုပ်ပါ။
ဤ site အစောပိုင်းကအချို့သောသတင်းအချက်အလက်င်နိုင်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့သဘောသဘာဝအားဖြင့်ဤရွေ့ကားကြိုတင်သတင်းအချက်အလက်ခေတ်နှင့်သာရည်ညွှန်းရည်ရွယ်ချက်ရှိပါသည်။ ကျနော်တို့သည့်အချိန်တွင်မဆိုဤ website များ၏ content ပြောင်းလဲခွင့်ကြိုတင်ယူထားပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်သတင်းအချက်အလက် update လုပ်ဖို့အဘယ်သူမျှမတာဝန်ရှိသည်။ သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ site ကိုမှအပြောင်းအလဲများကိုစောင့်ကြည့်ဖို့သင်၏တာဝန်သဘောတူသည်။
ဆောငျးပါး4- THE SERVICE ကိုဖျောင်းဖျနှင့်စျေးနှုန်း
ကျနော်တို့သည့်အချိန်တွင်မဆိုအသိပေးစာမပါဘဲဝန်ဆောင်မှု (နှင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုမဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာ) ကိုပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်ရပ်ဆိုင်းကြောင်းဖို့အခြိနျမရှေးခွင့်ရှိသည်။
ဆောငျးပါး5- ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှု (ရှိလျှင်)
တချို့ကထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်သီးသန့်အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပေမည်။ ဤရွေ့ကားကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုသာကန့်သတ်ပမာဏမရရှိနိုင်ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်သွားပေါ်လစီနှင့်အညီပြန်သို့မဟုတ်ဖလှယ်မှုမှဘာသာရပ်ဖြစ်နိုင်သည်။
ငါတို့ကဲ့သို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတတ်နိုင်သမျှကျွန်မတို့ရဲ့ဆိုင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏အရောင်အဆင်းနဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြသနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကိုပြု၏။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ကွန်ပျူတာ၏မျက်နှာပြင်အားဖြင့် color display ပါလိမ့်မည်ဟုအာမခံချက်မပေးနိုငျသညျ။
ကျနော်တို့မဆိုလူတစ်ဦးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ရောင်းအားကန့်သတ်ခြင်း, အဲဒီလိုလုပ်ဖို့တာဝနျရှိခံခြင်းမရှိဘဲ, နှင့်မည်သည့်ပထဝီဧရိယာသို့မဟုတ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွက်ခွင့်ရှိသည်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီအမှု၌ဤညာဘက်ကိုလေ့ကျင့်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပူဇော်မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏အရေအတွက်ကန့်သတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထုတ်ကုန်များအားလုံးထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်များနှင့်စျေးနှုန်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မာသတိမှာကြိုတင်သတိပေးခြင်းမရှိပဲမည်သည့်အချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့သည့်အချိန်တွင်မဆိုတစ်ဦးကုန်ပစ္စည်းရာပူဇော်သက္ကာကိုရပ်တန့်ဖို့ခွင့်ရှိသည်။ ပညတ်တရားအားဖြင့်တားမြစ်ထားသောရှိရာကဒီ site ပေါ်တွင်ပါရှိသောမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များအတွက်မဆိုကမ်းလှမ်းမှုပျက်ပြယ်သည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ထုတ်ကုန်န်ဆောင်မှု, သတင်းအချက်အလက်, သို့မဟုတ်သင်ဝယ်ယူသို့မဟုတ်ရရှိသောရှိသည်ဟုမဆိုအခြားကုန်စည်များ၏အရည်အသွေးသည်သင်၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်မဆိုအမှားများကိုတညျ့မမည်ပါလိမ့်မယ်အာမမခံနိုင်ပါဘူး။
ဆောငျးပါး6- တိကျမှန်ကန်မှုကို ACCOUNT ကိုသတင်းအချက်အလက်များငွေတောင်းခံခြင်း
အကြှနျုပျတို့သညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူနေရာမဆိုအမိန့်ငြင်းဆန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်ကိုယ်ဝါးသမ္မာသတိရှိအိမ်ထောင်စုနှုန်းသို့မဟုတ်အမိန့်နှုန်း, လူတစ်ဦးနှုန်းဝယ်ယူပမာဏကိုလျှော့ချသို့မဟုတ် cancel လိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားကန့်သတ်တူညီသောဖောက်သည်အကောင့်သို့မဟုတ်များအတွက်နေရာချအမိန့်, တူညီတဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်, နှင့် / သို့မဟုတ်တူညီသောငွေတောင်းခံနှင့် / သို့မဟုတ်ရေကြောင်းကိုအသုံးပြုမှာစာများပါဝင်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့အမိန့်ပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ကိုပယ်ဖျက်သင့်ပါတယ်လျှင်မယ်လို့လျှင်, ငါတို့သည်အချိန်တွင်ပေးအပ် e-mail ကိုနှင့် / သို့မဟုတ်ငွေတောင်းခံလိပ်စာ / ဖုန်းနံပါတ်မှာသငျသညျဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုအကြောင်းကြားရန်ကြိုးစားစေခြင်းငှါ အမိန့်ထားရှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်း, ကုန်သည်တွေ, ပြန်လည်ရောင်းချသူများသို့မဟုတ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းမှလာရန်ထင်ရှားစေခြင်းငှါ, ထိုအမိန့်ကန့်သတ်ရန်သို့မဟုတ်တားမြစ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုင်ပေါ်မှာရှိသမျှအမိန့်အဘို့အပြည့်စုံနဲ့တိကျမှန်ကန်, ထိန်းချုပ်မှုသတင်းအချက်အလက်များကိုအကောင့်ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ရန်သဘောတူပါသည်။ သငျသညျခရက်ဒစ်ကဒ်နံပါတ်နှင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်စွဲများ, သင့်အီးမေးလိပ်စာအပါအဝင်ချက်ချင်းသင့်အကောင့်များနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များ update လုပ်ဖို့သဘောတူဒါကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်လိုအပ်သောလျှင်သင်ဆက်သွယ်ပါတွန်း။
ဆောငျးပါး7- ဆန္ဒရှိမှရွေးပါ Tools များ
ကျနော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းကြောင့် Third-party tools တွေကိုအသုံးပြုခွင့်သို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်ရေး, ဒါမှမဟုတ်ထိန်းချုပ်မှု, ဒါမှမဟုတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများကိုနိုင်ဘူး။
မည်သည့်မျိုးမဆိုအာမခံ, ကိုယ်စားပြုမှုသို့မဟုတ်ခွအေနအေမပါဘဲနှင့်မည်သည့်ထောက်ခံချက်မပါဘဲ "အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါ" "ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်" နှငျ့သငျအသိအမှတျပွုကျွန်ုပ်တို့ထိုကဲ့သို့သော tools တွေကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးကြောင်းသဘောတူသည်။ ကျနော်တို့ထဲကသို့မဟုတ်တတိယပါတီများဤ optional ကို tools များအသုံးပြုခြင်းမှဆက်စပ်ပေါ်ထွက်လာသောအဘယ်သူမျှမဥပဒေရေးရာတာဝန်ယူမှုရှိရလိမ့်မည်။
သငျသညျထို site ပေါ်တွင်ကမ်းလှမ်း optional ကို tools များသုံးလျှင်, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်အဲဒီလိုနှငျ့သငျအဲဒီကိရိယာပေးသွင်းသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန် (s) ကိုတတိယကကမ်းလှမ်းနေကြရသောဖို့အခြေအနေများနှင့်တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့သည်အနာဂတ်အတွက် (အသစ်ရေးကိရိယာများနှင့်အရင်းအမြစ်များအပါအဝင်) ကြှနျုပျတို့၏ website တွင်အသစ်သောဝန်ဆောင်မှုများနှင့် / သို့မဟုတ် features အသစ်ပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအသစ်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အသစ်န်ဆောင်မှုကိုလည်းရောင်းချခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းဤအခြေအနေများမှဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဆောငျးပါး 8 - third party Links များ
ဒီ site ပေါ်တွင်တတိယပါတီများထံမှ links ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဆက်နွယ်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းတတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုဒ်များမှသငျသညျကိုညွှန်ကြားလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ဒီဆိုက်များတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုသို့မဟုတ်တိကျမှန်ကန်မှုကိုဆန်းစစ်သို့မဟုတ်အကဲဖြတ်ဖို့မလိုအပ်ပါ, ကြှနျုပျတို့အပျေါရရှိနိုင်မဆိုအကြောင်းအရာ, က်ဘ်ဆိုက်, ထုတ်ကုန်, ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းကိုမတာဝန်ယူမှုကိုအာမခံနှင့်မယူဆကြဘူးသို့မဟုတ် ဤတတိယပါတီက်ဘ်ဆိုက်များကတည်းက။
ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောတတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုဒ်များနှင့် ဆက်စပ်. ဝယ်ယူသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုကုန်စည်, ဝန်ဆောင်မှုများ, အရင်းအမြစ်များ, အကြောင်းအရာ, သို့မဟုတ်အခြားငွေပေးငွေယူနှင့်ပတ်သက်သောဒဏ်ရာသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိုက်မရှိကြပေ။ တတိယပါတီများ၏မူဝါဒများနှင့်အလေ့အကျင့်ကိုဖတ်ခြင်းနှင့်သငျသညျမဆိုငွေပေးငွေယူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမတိုင်မီသူတို့ကိုသင်နားလည်သေချာပါစေ။ တိုင်ကြားမှုများ, တောင်းဆိုမှုများ, စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ, သို့မဟုတ်ဤတတိယပါတီများ၏ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုအတူတူပင်တတိယပါတီမှဘာသာရပ်ဖြစ်သင့်သည်။
ဆောငျးပါး9- မှတ်ချက်များ, အကြံပေးချက်များနှင့်အဆိုပြုချက်များအခြားအသုံးပြုသူများ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုမှာ, သင် (ပြိုင်ပွဲများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်, ဥပမာများအတွက်) တိကျသောအကြောင်းအရာတင်ပြရန်, အကယ်. , ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ထံမှတောင်းဆိုချက်တစ်ခုမပါဘဲသင်သည်ဖန်တီးမှုစိတ်ကူးစိတ်သန်း, အကြံပေးချက်များ, အဆိုပြုချက်, အစီအစဉ်များသို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများပေးပို့, ကအွန်လိုင်းသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင် e-mail,, မေးလ်, သို့မဟုတ် (စုပေါင်း, "မှတ်ချက်များ") အားဖြင့်, သင်ဖြန့်ဝေ, ထုတ်ဝေ, ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မများနှင့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲလက်ျာဘက်, ပြင်ဆင်ရန်, မိတ္တူပေးရန် , ဘာသာပြန်ဆိုနှင့်မဟုတ်ရင်မဆိုအလတ်စားနှင့်အသငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုပေးပို့မည်သည့်မှတ်ချက်များအတွက်သုံးပါ။ ကျနော်တို့မရဖြစ်ကြပြီးမှတ်ချက်တွေများ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ (1) ကျင်းပခံရဖို့ရှိသည်မည်မဟုတ်; (2) ထောက်ပံ့ပေးမဆိုမှတ်ချက်တွေအဘို့မဆိုလူတစ်ဦးမှလျော်ကြေးပေးဆောင်ရန်, မှတ်ချက်များကိုတုံ့ပြန်ရန် (3) ။
ကျနော်တို့ may, ဒါပေမယ့်ဒါလုပ်ဖို့စောင့်ကြည့်ဖို့, ပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်ငါတို့သည်ငါတို့၏တစ်ဦးတည်းသောသမ္မာသတိအတွက်ဆုံးဖြတ်ရန်အကြောင်းအရာကိုဖယ်ရှားပစ်, တရားမဝင်ထိုးစစ်, ခြိမ်းခြောက်, သရေဖျက်မှု, အသေရေဖျက်, ညစ်ညမ်း, ညစ်ညမ်းသောသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ကန့်ကွက်စရာ, ဒါမှမဟုတ်ကြောင်းချိုးဖောက်မှုဖြစ်ရန်မတာဝန်ရှိ မည်သည့်မူပိုင်သို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းဤသတ်မှတ်ချက်များကို။
သငျသညျမူပိုင်ခွင့်, အမှတ်တံဆိပ်, privacy ကို, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, ဒါမှမဟုတ်အခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်အခွင့်အရေးများအပါအဝင်တတိယပါတီများရဲ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မမှတ်ချက်များ, post သဘောတူသည်။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့မှတ်ချက်များ, တရားမဝင်အသေရေဖျက်, ထိုးစစ်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောဆံ့မည်မဟုတ်ကြောင်းသဘောတူ, သူတို့ of Service ကိုတစုံတမျိုးသည်စစ်ဆင်ရေးအတွင်းထိခိုက်စေအံ့သောငှါကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်များသို့မဟုတ်အခြားအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲမဆံ့မပါဘူး သို့မဟုတ်မည်သည့်ဆက်စပ်က်ဘ်ဆိုက်။ သင်မဟုတျပါသို့မဟုတ်သင့်မှတ်ချက်များ၏မူလအစအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုနှင့် / သို့မဟုတ်အမှားအတွက်တတိယပါတီများမှသွေးဆောင်ဖို့ကြိုးစားသူတစ်ဦးဦးဖြစ်ရန်, မိစ္ဆာ e-mail လိပ်စာကိုအသုံးပြုဖို့ဟန်ဆောင်လို့မရပါဘူး။ သငျသညျအပြည့်အဝငျသညျ post မှတ်ချက်များအားလုံးကိုတာဝန်ရှိသည်အဖြစ်တိကျမှန်ကန်မှုရှိပါတယ်။ ငါတို့သည်နောက်တာဝန်လက်ခံသင်သည်မည်သည့်တတိယပါတီ post သို့မဟုတ်ထုတ်ဝေရန်ကိုမဆိုမှတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာကတိကဝတ် Disclaimer ။
ဆောငျးပါး 10 - ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ
ဆောငျးပါး 11 - အမှား, တိ AND ပျက်ကွက်
ဒါဟာထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်, စျေးနှုန်း, ပရိုမိုးရှင်းများ, ကမ်းလှမ်းချက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါကြှနျုပျတို့၏ site ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်သတ်ပုံအမှားများကို, တိသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်ပါဝင်နိုင်သောဝန်ဆောင်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုရှိကွောငျးဖွစျနိုငျ ရေကြောင်းထုတ်ကုန်ပေးပို့ကြိမ်နှင့်ရရှိနိုင်မှု။ အဆိုပါမဆိုအမှားများကိုပြင်ခွင့်, တိ, ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်မည်သည့်ဆက်စပ်က်ဘ်ဆိုက်အတွက်မဆိုသတင်းအချက်အလက်တိပါလျှင်အမိန့်ကိုပြောင်းလဲသို့မဟုတ်ကို update သတင်းအချက်အလက်များကိုသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းရန်နှင့်ကျနော်တို့ကြိုတင်ယူထား ကြိုတင်သတိပေးခြင်းမရှိပဲသည့်အချိန်တွင်မဆို (သင်ကသင်၏အမိန့်ကိုနေရာချပြီးနောက်အပါအဝင်) ။
ကျွန်တော်တို့သည်လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်မည်သည့်ဆက်စပ်က်ဘ်ဆိုက်အတွက်သတင်းအချက်အလက်များကို update ပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်ရှင်းလင်းရန်မတာဝန်အောက်မှာရှိပါတယ်အပါအဝင်ပေမယ့်ပညတ်တရားအားဖြင့်လိုအပ်သောအဖြစ် မှလွဲ. သတင်းအချက်အလက်ရောင်းစျေးသတ်မှတ်ကန့်သတ်ထားဘူး။ အဘယ်သူမျှမတိကျတဲ့ရက်စွဲကို update ကိုဒါမှမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်မည်သည့်ဆက်စပ်က်ဘ်ဆိုက် refresh ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်မည်သည့်ဆက်စပ်က်ဘ်ဆိုက်အတွင်းသတင်းအချက်အလက်ပြောင်းလဲသွားတယ်သို့မဟုတ် updated ပြီနိဂုံးချုပ်အတွက်အကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်။
ဆောငျးပါး 12 - တားမြစ်ထားသောကိုအသုံးပြုသည်
အဆိုပါရောင်းရန်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ထွက်သွား set တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုနှင့်အသုံးပြုမှုအပြင်, သငျသညျထို site သို့မဟုတ်သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုအသုံးမပြုစေခြင်းငှါ: (က) မည်သည့်ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောရည်ရွယ်ချက်သည် ဖြစ်. , (ခ) တရားမဝင်လုပ်ရပ်များထွက်သယ်ဆောင်ရန်အခြားသူများကိုအားပေးဖို့သို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူ; မည်သည့်ဒေသဆိုင်ရာအမိန့်သို့မဟုတ်, နိုင်ငံတကာဖက်ဒရယ်, ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်မဆိုဥပဒေ, စည်းမျဉ်းသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချိုးဖောက်ရန် (ကို C); ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိဥာဏ်ပညာဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်တတိယပါတီများမှထိုထိပါးသို့မဟုတ်ချိုးဖောက်ရန် (ဃ); (E) နဲ့, အလွဲသုံးစားမှု, စော်ကားနှောင့်ယှက်ညှဉ်းဆဲ, ရဖျက်, ကဲ့ရဲ့ခြင်း, နှိမ်, ခြိမ်းခြောက်သို့မဟုတ်ကျားမ, လိင်, ဘာသာရေး, လူမျိုးရေး, ပြိုင်ပွဲအပေါ်အခြေခံပြီးမည်သူမဆိုဆန့်ကျင်ခွဲခြားမှု, အမှ အသက်, မူရင်းနိုင်ငံသား, ဒါမှမဟုတ်မသန်စွမ်း; (စ) အယူမှားသို့မဟုတ်အထင်မြင်မှားစေသောသတင်းအချက်အလက်များတင်ပြခြင်းငှါ၎င်း, (G) ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်မည်သည့်ဆက်စပ်က်ဘ်ဆိုက်, လွတ်လပ်သော, ဒါမှမဟုတ်အင်တာနက်ကို၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုသို့မဟုတ်စစ်ဆင်ရေးအလျှော့ပေးလိုက်လျောဖို့အသုံးပြုနိုင်လိမ့်မည်ဟုအန္တရာယ်ရှိတဲ့ Code များကိုအခြားအမျိုးအစား upload သို့မဟုတ် transmit လုပ်ဖို့; တခြားသူတွေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသို့မဟုတ်ခြေရာခံ (H ကို); (ငါ) polluposter အဘို့, phishing, ဝဘ် (သို့မဟုတ်အခြားသယံဇာတ) စူးစမ်းသို့မဟုတ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေး, browse, သတင်းအချက်အလက် extract တစ်ဒိုမိန်း hijack; ညစ်ညမ်းသောသို့မဟုတ်သိက္ခာမဲ့ရည်ရွယ်ချက်များမှ (ဂျေ); သို့မဟုတ် (ဋ) လုံခြုံရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု၏အတိုင်းအတာကိုအခြားက်ဘ်ဆိုက်, ဒါမှမဟုတ်အင်တာနက်ကိုထိပါးသို့မဟုတ်ရှောင်ကွင်းရန်။ ကျနော်တို့ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်တားမြစ်ထားသောအသုံးပြုမှုချိုးဖောက်ဘို့ကိုမဆိုဆက်စပ်က်ဘ်ဆိုက်၏သင့်အသုံးပြုမှုအဆုံးသတ်ခြင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဆောငျးပါး 13 - အာမခံ၏ Disclaimer AND liabilities များ၏ကန့်သတ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကသင်၏အသုံးပြုမှု, မပြတ်မတောက်အချိန်မီ, လုံခြုံသို့မဟုတ်အမှားအခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်အကြောင်းခိုင်လုံမဟုတ်သို့မဟုတ်မည်သည့်လမ်းထဲမှာမဟန်ဆောင်ကြဘူး။
ကျနော်တို့ of Service ကိုအသုံးပွုခွငျးဖွငျ့ရယူစေခြင်းငှါရလဒ်တိကျမှုသို့မဟုတ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအာမမခံနိုင်ပါဘူး။
သငျသညျဖော်ပြဝန်ဆောင်မှုကသင်၏အသုံးပြုမှု, သို့မဟုတ်ပါကအသုံးပြုရန်သင်၏နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, သင့်ဝါးအန္တရာယ်မှာကြောင်းသဘောတူသည်။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်သင်တို့မှပေးအပ်အားလုံးထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ (အတိအလင်းကိုမဟုတ်ရင်ဖော်ပြထားမဟုတ်လျှင်) များမှာကိုယ်စားပြုမှုမရှိပဲ, မပါဘဲ, သင့်အသုံးပြုရန် "အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါ" "ဖြစ်သကဲ့သို့" နှင့်ပေးအပ် ကုန်သည်သို့မဟုတ်ကုန်သည်မဆိုဆိုလိုအာမခံ, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်, ကြာရှည်ခံမှု, ခေါင်းစဉ်နဲ့ Non-ချိုးဖောက်မှုများအတွက်ကြံ့ခိုင်ရေးအပါအဝင်အမြန်သို့မဟုတ်အဓိပ်ပာအာမခံချက်နှင့်မဆိုကြင်နာ၏အခြေအနေများမရှိပဲ, ။
Outilsdecuisine.com ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါရိုက်တာများ, အရာရှိများ, ဝန်ထမ်းများ, affiliates, အေးဂျင့်များ, ကန်ထရိုက်တာ, နိုင်ငံတကာ, ပေးသွင်းသူများ, ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်လိုင်စင်ရအခြေအနေမျိုးမှာမဆိုဒဏ်ရာ, ဆုံးရှုံးမှု, ပြောဆိုချက်ကို, ဒါမှမဟုတ်မဆိုတိုက်ရိုက်များအတွက်ထိုက်ကျင်းပစေခြင်းငှါ, သွယ်ဝိုက်, ဖွစျပှား, ပြစ်ဒဏ်ခတ်အထူး, ဒါမှမဟုတ်လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအကျိုးအမြတ်ဆုံးရှုံးမှုကန့်သတ်ထားအပါအဝင်သော်လည်းမဆိုမျိုးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, ဝင်ငွေ, ငွေစု, ဒေတာအစားထိုးကုန်ကျစရိတ်သို့မဟုတ်မည်သည့်အလားတူပျက်စီးမှုကြောင့် သူတို့စာချုပ်, (ပင်ပေါ့ဆမှု၏အမှု၌) တရားမျှတမှုမရှိခြင်း, တင်းကြပ်တာဝန်ယူမှုသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်, ဒီဝန်ဆောင်မှုကနေမဆိုန်ဆောင်မှုဒါမှမဟုတ်ထုတ်ကုန်များသင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုကနေပေါ်ပေါက်ခြင်းသို့မဟုတ်သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုမှမဆိုလမ်းအတွက် related အခြားမည်သည့်အရေးဆိုရန်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်, မည်သည့်အကြောင်းအရာအတွက်မဆိုအမှားများကိုသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်ရန်ကန့်သတ်ထားအပါအဝင်သော်လည်းမ, ဒါမှမဟုတ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာမဆိုကြင်နာမဆိုအရှုံးသို့မဟုတ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှု သငျသညျကိုသူတို့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်နိုင်ခြေ၏အကြံပြုခဲ့ကြလျှင်ပင်, ထိုဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်မည်သည့်အကြောင်းအရာ (သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်) Posted ကိုသုံးပါကူးစက်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်န်ဆောင်မှုများမှတဆင့်ရရှိနိုင်ပါစေတော်မူ၏။ အချို့သောပြည်နယ်များသို့မဟုတ်တရားစီရင်မှုလက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်ဖွစျပှားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာဝန်ယူမှုများဖယ်သို့မဟုတ်ကန့်သတ်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါသောကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ယူမှုကိုဥပဒေဖြင့်ခွင့်ပြုထားသောအမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာကန့်သတ်ခံရကြလိမ့်မည်။
ဆောငျးပါး 14 - INDEMNIFICATION
သင်, indemnify ကာကွယ်ရန်နှင့် Outilsdecuisine.com ကာကွယ်ပေး, ငါတို့မိဘကုမ္ပဏီခွဲများ, affiliates, မိတ်ဖက်, အရာရှိများ, ဒါရိုက်တာများ, အေးဂျင့်များ, ကန်ထရိုက်တာ, လိုင်စင်ရ, ဝန်ဆောင်မှုပေး, ကန်ထရိုက်, ပေးသွင်းသူများ, နိုင်ငံတကာဖို့သဘောတူ သောသူတို့သည်ရည်ညွှန်းဖို့ဆိုပြောဆိုချက်ကိုသို့မဟုတ်ဝယ်လိုအား, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ရှေ့နေများ '' အဖိုးအခများအပါအဝင်ကြောင့်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းရန်ဤသတ်မှတ်ချက်များသည်သင်၏ချိုးဖောက်မှုကနေဖြစ်ပေါ်လာမဆိုတတိယပါတီဖွငျ့အသုံးပြုနည်းသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းများအဘို့န်ထမ်းများသို့မဟုတ် မည်သည့်ဥပဒေသို့မဟုတ်တတိယပါတီများ၏အခွင့်အရေးများကိုသင့်ကိုချိုးဖောက်။
ဆောငျးပါး 15 - ပြင်းထန်
ဤအရောင်းစျေး၏အခြေအနေများနှင့်အသုံးပြုမှုမဆိုပြဋ္ဌာန်းချက်တရားမဝင်ပျက်ပြယ်သို့မဟုတ်မပြုနိုင်ဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူလျှင်, ထိုပြဌာန်းချက်မည်သို့ပင်ဆိုစေသက်ဆိုင်သောပါတီစဉ်းစားရကြလိမ့်မည်ပညတ်တရားအားဖြင့်ခွင့်ပြုညျ့အဝအတိုင်းအတာအထိပြဌာန်းနှင့်မခံရကြလိမ့်မည် ရောင်းချခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းဤအခြေအနေများကနေကွဲကွာခံရခြင်း, ဒီခွဲခြာမဆိုကျန်ရှိသောပြဋ္ဌာန်းချက်များ၏တရားဝင်မှုနှင့်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းမထိခိုက်သင့်ပါတယ်။
ဆောငျးပါး 16 - Terminator
မတိုင်မီရပ်စဲနေ့စွဲဖို့ပါတီများမြှုတ်အဆိုပါတာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် liabilities ဒီသဘောတူညီချက်များ၏ရပ်စဲရှင်သန်အပေါင်းတို့နှင့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မူလိမ့်မည်။
သငျသညျသို့မဟုတ်မဖြစ်စေခြင်းဖြင့်ရပ်စဲမဟုတ်လျှင်နှင့်သည်အထိဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ရောင်းချခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း၏အခြေအနေများထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျရောင်းရန်ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအဆုံးသတ်ခြင်းနှင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏ site ကို အသုံးပြု. ကိုရပ်တန့်ပါလျှင်သင်တို့သည်နောက်တဖန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်ဆန္ဒရှိ, ဒါမှမဟုတ်ကိုကိုအသိပေးခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မသုံးပါလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝါးသမ္မာသတိရှိသငျသညျပကျြကှကျခွငျးသို့မဟုတျအကြှနျုပျတို့သညျဤအရောင်းစျေး၏အခြေအနေများနှင့်အသုံးပြုမှု၏စည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာနိုင်ခြင်းဖြစ်ရပြီသံသယလျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုလည်းသတိပေးမရှိဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်မဒီသဘောတူညီချက်ရပ်ဆိုင်းစေခြင်းငှါ ကြိုတင်မဲအတွက်နှငျ့သငျ (အဆုံးစွန်သောပါဝင်သည်ခံ) ရပ်စဲ၏ယနေ့အထိအကြွေးအားလုံးပမာဏများအတွက်ထိုက်ဆက်လက်တည်ရှိမည်, နှင့် / သို့မဟုတ်ငါတို့သည်သင်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ဆောင်မှုများ (သို့မဟုတ် သိ. ဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှရယူငြင်းပယ်ခြင်းငှါ ) ။
ဆောငျးပါး 17 - တစ်ခုလုံးကိုသဘောတူညီချက်
ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အရောင်းစျေး၏အခြေအနေများနှင့်အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်ကြှနျုပျတို့သညျဤ site ပေါ်တွင်ဒါမှမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုမှလေးစားမှုအတွက်ထုတ်ဝေကြောင်းခေါင်းပုံဖြတ်မဆိုအခြားမူဝါဒသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းသင်နှင့်ကျွန်တော်တို့အကြားတစ်ခုလုံးကိုသဘောတူညီချက်နှင့်နားလည်မှုဖွဲ့စည်းမှုနှင့်သင်တို့၏အသုံးပြုမှုကိုအုပ်ချုပ် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် (အပါအဝင်သော်လည်းမကန့်သတ်ထား, ရောင်းရန်များ၏သတ်မှတ်ချက်များကိုမဆိုကြိုတင်ဗားရှင်းနှင့်အသုံးပြုမှု) သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့အကြား, အတိတ်နှင့်ခေတ်ပြိုင်, ပါးစပ်သို့မဟုတ်စာဖြင့်ရေးသား, ရှိသမျှဆက်သွယ်ရေး, အဆိုပြုချက်များနှင့်သဘောတူညီချက်များပယ်ဖျက်အစားထိုးသည်။
ဆောငျးပါး 18 - သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ
ဤရွေ့ကားအထွေထွေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အအသုံးပြုခြင်း, ငါတို့သည်န်ဆောင်မှုများ 22 Rue Neuve အတွက်အင်အားသုံးအတွက်ဥပဒေများအောက်တွင်အုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့်အနက်ပါလိမ့်မည်ပေးထားတဲ့မှတဆင့်အခြားမည်သည့်သီးခြားသဘောတူညီချက်, VERNOU BRENNE ON, F, 37210, ပြင်သစ်။
ဆောငျးပါး 19 - အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများပြောင်းလဲ
သငျသညျရောင်းရန်၏စည်းမျဉ်းများ၏နောက်ဆုံး version ကိုစစျဆေးနှင့်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မသုံးပါနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့သည်အကို update ကိုပြောင်းလဲရန်သို့မဟုတ်အစားထိုးရန်ရောင်းရန်ဤအခြေအနေများမဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်နှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်ပြောင်းလဲမှုများကိုပို့စ်တင်နေဖြင့်အသုံးပြုနည်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်, ခွင့်ရှိသည်။ ဒါဟာအပြောင်းအလဲများကိုကြပြီဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးနိုင်ရန်မှန်မှန်ကျွန်ုပ်တို့၏ site သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်သင့်တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါရောင်းရန်ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုမှမဆိုပြောင်းလဲမှုစာတိုက်နှင့်အသုံးပြုမှုအောက်ပါသင့်ရဲ့ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ site မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသူများပြောင်းလဲမှုများလက်ခံမှုရှိပါသည်။
ဆောငျးပါး 20 - DETAILS
ရောင်းချခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း၏စည်းမျဉ်းများနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းလွှာကျွန်တော်တို့ကို outilsdecuisine@gmail.com ကိုစေလွှတ်ရပါမည်။
ထိုနေ့၏ Menu ကို
© Copyright Outilsdecuisine.com 2019 ။ All rights reserved